Uludwe lwexesha langaphambili nelo xesha namhlanje Bonisa iiMikhosi
Ukusuka eGalloway ukuya eGuthrie, Ukukhangela Kwiimeko Ezininzi "Ngamhlanje"
"I-Today Show " i-NBC eyaziwayo yintetho yenkulumo yasekuseni kunye nenkqubo yeendaba. Nangona i-show iyaziwa ngoku nje ngokuba " namhlanje ," ibe yimoya ukususela ekuqaleni kwee-1950. Kule minyaka, le mboniso sele ibe yindawo yokuqala yezinto ezininzi ze-anchor zemisebenzi, ubuso obuqhelekileyo obubingelelayo kusasa ngalunye.
Mhlawumbi uyazi igama elithi Matt Lauer kwaye unakho ukukhumbula ixesha lakhe elihlangene no-Katie Couric owayesemva kwedeskrit yesikebhe iminyaka eyi-15.
Sekunjalo, ngaba uyayazi ukuba uluhlu olubalaseleyo lwe " namhlanje" lubandakanya uBarbara Walters, uTom Brokaw, noBryant Gumbel?
Makhe sijonge kwiinkqubo ezininzi zokubambisana kunye nendlela abaye beza ngayo.
UDave Garroway (ngo-1952 ukuya ku-1961)
UDave Garroway wayengumkhosi wokuqala we " Today Show " ngowe-1952. Indalo yaseNew York yayiyiphepha kwi-NBC, isebenza ngendlela ephakanyisiweyo kwiindawo ezininzi kwiimboniselo zethelevishini nakumajelo kulo lonke ilizwe. Waziwa ngokuba ngu-"Roving Announcer," uhlale ekwazi ukufumana ibali.
Ngomnyaka we-1951, wabamba iintlobo ezahlukahlukeneyo ezibizwa ngokuba yi " Garroway in Large ." Ukuthandwa kwaloo mboniso kukhokelela umongameli we-NBC uPat Weaver ukuba aqeshwe i-Garroway njengomninimzi wokuzonwabisa wakhe omtsha / inkqubo yeendaba. Xa " namhlanje " iqalisiwe, yaxhaswa ngabagxeki, kodwa isitayela se-Garroway esilula sagqitha ngaphezu kwabaphulaphuli kwaye ekugqibeleni, abagxeki nabo.
Emva kweminyaka engama-10 kwiprogram - kwaye ngelixa ukulwa nokuxinezeleka ngokufihlakeleyo - I-Garroway ithe yavuma ngo-1961, ithi ufuna ukuchitha ixesha elininzi kunye nezingane zakhe.
John Chancellor (1961 ukuya ku-1962)
UJohan Chancellor wayengumntu weendaba ezilungileyo kunye nomninimzi othandwayo we " NBC News Nightly ." Xa i-Garroway ihoxise ukususela " namhlanje ," uChansela wabuzwa ukuba angene.
I-Chancellor yavuma ukuyizama, kodwa ayizange idibane nabaphulaphuli kwaye ayizange ihlaziye indima yombutho ohamba ngokulula.
Wacela ukuba akhululwe kwisivumelwano sakhe kwaye uNBC yavuma. Inxansela ishiye " namhlanje " ezinyangeni ezili-14 emva kokuqalisa.
UHugh Downs (ngo-1962 ukuya ku-1971)
I-Chancellor yatshintshwa ngu-Akron, waseOhio wase-Ohio uHugh Downs , owakhe wenza igama njenge-anchor yeendaba, umbhali, umbonisi wezemidlalo, umqambi womculo, nokunye okuninzi. I-Downs yayicingwa njengomnye wemikhosi "ethandwayo" namhlanje , ekhetha ukuhamba emva kweminyaka engama-10 kwimbonakalo.
UFrank McGee (ngo-1971 ukuya ku-1974)
UFrank McGee wayengumdlili weendaba ezibuhlungu kwaye, emva kokuthatha iingcongolo ze " Today Show " ngo-1971, waqondisa umboniso kuloo ndlela.
UMcGee wagxininisa ekuvuleni nasekuvaleni umboniso wedwa-mhlawumbi ngenxa yokuba wayesongelwa ngu-journalists u-Barbara Walters, owayengenxalenye ye " namhlanje " ukususela ngo-1961. Ngoko esongelwa nguWalters, uMcGee naye wagxininisa ukucela iindwendwe zokuqala imibuzo emithathu yodliwano ndlebe, phambi kokuba uWalters angene kuyo.
UMcGee washiya " namhlanje " ngowe-1974 emva kokuphelelwa yimfazwe ngomhlaza wesifo.
UBarbara Walters (ngo-1974 ukuya ku-1976)
Emva kokuhamba kukaMcGee ngokungalindelekanga, uNBC yagqitywa ngokuthi nguBarbara Walters njengomncedisi we " Namuhla ," emenza abe ngowokuqala umlingani weprogram. UWalters wayesele esebenza kwisithuba seminyaka embalwa ngaphambili.
UWalters washiya ngowe-1976 ukudibanisa "i- ABC Evening News ".
UJim Hartz (ngo-1974 ukuya ku-1976)
U-Jim Hartz wase-Oklahoma wenza indlela yakhe ngokusebenzisa uluhlu lweendima zokusasaza ngaphambi kokuba abe ngumbonakalo weendaba zakusihlwa kwiWNBC eNew York. Ukusuka apho, umnatha wamcela ukuba angene noBarbara Walters njengombambano-nxaxheba we " Today Show Show ."
U-Hartz unamathele ngumboniso iminyaka emibili, ngaphambi kokuba uWalters ashiye kwaye uNBC inqume ukugqithisa inkqubo.
UTom Brokaw (1976 ukuya ku-1981)
Namhlanje, uyaziwa ngokuba yi- NBC Nightly News " kunye nomlobi we-" Greatest Generation. "Kodwa, uTom Brokaw waba negama lomninimzi njengowomninimzi" namhlanje " kunye noJane Pauley ngasekupheleni kwee-1970 kunye 80s.
U-Brokaw washiya waya xa wayeceliwe ukuba ancede " iindaba zoBusuku ."
UJane Pauley (ngo-1976 ukuya ku-1989)
Ngendlela, uJane Pauley wazisa ababukeli kwixesha langoku " namhlanje ." Kwakuye kunye noBrkaw ukuba iqela elithandwayo lomlingani-omnye wesilisa, omnye wesifazane - wayeza kubambelela inkqubo yeendaba zentsasa kunye neentengiso zeendlebe kunye neentloko ezilinganayo.
U-Pauley waba nomdla kakhulu njengalowo " Namuhla " ohlangene naye, kunye noBryant Gumbel.
Emva kweminyaka engaphezu kwe-10 kwiprogram, uPaley uthe wathandeka kwiiyure ezinzima kunye nokulindela ezihambelana neenkqubo. I-rumor yaphakamisa ukuba i-NBC yayiyidonsa ukuba ihambe ukuze ikwazi ukumthabatha inxaxheba kumncinci omncinane. Ngama-1989, kwakwanele, kwaye u-Pauley uthengisa umrhumo.
UBryant Gumbel (ngo-1982 ukuya ku-1997)
Ubuninzi beBryant Gumbel e-" Today " yadibana neengxabano. Ngaphambi kokuba aqale, kwakukho i-tussle phakathi kwabaphathi be-NBC malunga nokuba iGumbel yayiya kukhetha. Emva koko, wayeyintatheli yezemidlalo kwaye intatheli yeendaba ezilukhuni ingaba yindawo engcono esikhundleni sikaTom Brokaw.
I-Gumbel inqobile umhla kwaye ngokukhawuleza iphumelele nakwabameli. Waba ngowokuqala wase-Afrika-waseMelika ukuba abambe iqhaza kwinkqubo yokusa.
Kuthatha ixesha lokuba uGumbel noPaley bafumane isigqi esisebenza kakuhle, kodwa ekugqibeleni, i-duo iqhosha. Bonke, benza " namhlanje " kwiprogram ethandwayo namhlanje, ukuthatha inamba enye indawo kude ne " Good Morning America ."
UGumbel washiya " Namhlanje " kungekudala emva kokuba imemo yangaphakathi isasazwa apho uGumbel wagxeka malunga nendlela elawulwa ngayo namhlanje . Ngaloo nto, wathatha iibhotshi kumakhelwane kunye nabo basebenzisana naye, ngakumbi uWillard Scott.
UDeborah Norville (ngo-1990 ukuya ku-1991)
UDeborah Norville wathatha indawo kaJane Pauley njengomnxibelelanisi " namhlanje " ngo-1990, kodwa ukuqokwa kwakhe kwadibana nokuphikisana. Abaninzi babecinga ukuba uNorville wakhethwa ngenxa yokuba wayemncinci kunye no-Pauley.
Oku kungathi kwathintela izilinganiso, njengokuba " namhlanje " zidibene kwindawo yesibini emva kwe " GMA ."
Abaphathi beNervous, abaphathi be-NBC baxela uNorville emva kweminyaka engaphantsi konyaka emoyeni. UNorville uthi i-NBC yamkhupha ngelixa ekhulelwe ikhefu lokubeletha, emnika ithuba elincinane lokuthetha abantu abaphulaphuli kunye nabalingane bakhe. UNorville waya kumnceda "I- Edited Inside ."
UK Katie Couric (ngo-1991 ukuya ku-2006)
U-Katie Couric wayenomdla wokubambisana kakhulu " namhlanje " kwimbali yayo. Wajoyina " namhlanje " njengombambisene-mbambano ngo-1991 emva kokukhonza njengombhalisi wezepolitiki kazwelonke. I-Couric, kunye noBryant Gumbel kunye noMat Lauer, bakhe i-juggernaut "I- Today Show " eyayigcine "i- GMA " kwindawo engaphezulu kweminyaka eyi-16.
Nangona i-host-co-host, iCourric yayiza kufaka indawo yam Tom Brokaw njengengqama "ye- NBC Nightly News ." Kamva, uya kunikwa ithuba lokumisa "i- CBS Evening News ." Ukuqwalasela ithuba lokugqithisa, iCourric yathatha isikhundla kwaye yasuka " namhlanje " ngo-2006.
Matt Lauer (1997 ukuza)
Emva kokuhamba kukaGumbel, "i- Today 's" anchor, uMat Lauer, wabizwa ngokuba ngumlingani womboniso. I-Lauer kunye neCourric iqhosha ngokukhawuleza, ibe yiqela elinamandla kunazo zonke ekuhlanganyeleni kwimbali. Ngeminyaka engama-20 kumboniso, uLauer uye waba ngobuso bwanamhlanje " namhlanje " kwaye wabona abane-co-host hosts beza bahamba.
UMeredith Vieira (ngo-2006 ukuya ku-2011)
I-newswoman newswoman Meredith Vieira ithathe indawo ethandana no-Katie Couric ngo-2006. Ngaphambili, uViira wayekhonza njengomodareyitha kwi-ABC " Umbono ," owadalwa ngu-Barbara Walters owayengumphathi we-" Today ".
U-Vieira waba ngumlingani othandana naye kodwa ukhethe ukushiya inkqubo ngo-2011 ukuchitha ixesha elingakumbi nomyeni wakhe ogulayo.
U-Ann Curry (ngo-2011 ukuya ku-2012)
U-Ann Curry waphumelela e-Vieira njengomlingani-mbambano, emva kokuthatha indawo yeLauer njenge-anchor yeendaba ngo-1997. I-Curry yacelwa ukuba ishiye " namhlanje " njengomlingani-mbambano emva kweminyaka engaphantsi konyaka.
Ibali leentengiso zaye zixhaphaka, zishiya abanye ukuba bacinga ukuba uxoxwe ngenxa yokulinganisa nokuxabana kunye noLauer. I-Curry yahlala kunye nenethwekhi njengombhalisi wamazwe ngamazwe de ukugqitywa ngo-2015.
Savannah Guthrie (2012 ukuza)
" Umhla wokubambisana nomhla wamhlanje ngu Savannah Guthrie, owayesebenza njengombambisene weeyure lesithathu lo mboniso. Umntu oneminyaka engama-40 ubudala wayebizwa ngokuba ngumlingani-mbini ngosuku emva kokuhamba kukaCharry.
Kubonakala ngathi uGuthrie ulungele ukulinganisa kwemiboniso. Ngokuqhelekileyo ubizwa ngokuba yi-spunky kwaye uyathandeka, yonke into ababukeli besasa ekuseni. Nangona iindaba zentsasa zibonisa ukulinganisa ngokubanzi akuzange kube yinto ababekade beyiyo, " Namhlanje " ihleli kwimfazwe ebonwayo kunye ne " GMA."
Kuphi Ukubukela Kwemidlalo Ubonisa I-Intanethi Entsha
Iimpawu ezintle ezidibeneyo zikaKim Kardashian
Iintlintlanu eziPhambili zoPhicotho zokuPhepha
Udliwano-ntluphelo kunye no-Actor Will Estes (Inkwenkwezi ye-CBS 'i-Blue Bloods')
Abaqhubi beMidlalo yokuCima
I-Future of Anakin Skywalker's Apprentice, uAhsoka Tano
I-20 yeyona nto engathandekiyo "Eyingcwele" Imibulelo evela kwi-Series Batman Series
Ukudibanisa iSikethi se "Shahs of Sunset": Ilungelo elijongene neNkcubeko
Unokufumana njani iiTikiti kwi-'Dkt. Phil Show '
I-Architecture ye-Art Nouveau kunye noyilo
INgqungquthela Yonke yeCawa yeLDS (i-Mormon) yimiBhalo yanamhlanje
Izinto zokuBumba: Ukulinganisa
10 Iimpawu Ngee-Aardvarks
Abaphuli beqhwa kwiSikolo sokuQala seSikolo sokuQala
IHununted House (1859) nguCharles Dickens
Ukubala i-Degree of Difficult for Dives
Umthendeleko weNgcwele Intliziyo kaYesu
Emile Berliner kunye neMbali ye-Gramophone
Iincwadi ezi-Colorful kukunceda ukhethe imibala yePaint Colors
UJames Buchanan: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
Isikhokelo seGuadalupe Peak, iNtaba ephakamileyo kakhulu eTexas
Isiganeko soSasazo kunye neenkcazo
Juz '20 yeQuran
Iivesi zeMemori zeBhayibhile zeSpring
Guns N 'Roses Biography kunye neProfayili
Indlela i-Ireland ephefumlelwe ngayo iNdlu eNtsundu
I-High-Lofted, I-Low-Browser: Umqhubi we-Original Dick Driver
I-Rosetta Stone: Isingeniso